Global Voices teny Malagasy » Bangladesh: Mampanahy Amin’ny Fahampiana Ara-tSakafo Ny Fihenan’ny Fiankinan-doha Amin’ny Fambolena · Global Voices teny Malagasy » Print
Bangladesh: Mampanahy Amin'ny Fahampiana Ara-tSakafo Ny Fihenan'ny Fiankinan-doha Amin'ny Fambolena
Voadika ny 23 Oktobra 2012 12:46 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna
Firenena mivelona amin'ny fambolena i Bangladesh. Marobe ireo mponina no miankina amin'ny fambolena ny fivelomany. Ankehitriny, 19.1%-n'ny PIB (Vokatra Ankapobe Anatiny) dia avy amin'ity sehatra ity .
Navoakan'ny fanadihadiana farany teo  [bn] fa miha-mijotso ny fiankinan-doha amin'ny fambolena sy ny voka-pambolena ao amin'ny firenena. Nihena ihany koa ny fampiasana olona eo amin'ny sehatry ny fambolena. Nampiseho ny firoboroboan'ny sehatry ny indostria sy ny asa-tanana ny taompolo efatra farany teo, izany no antony voalohany indrindra.
Ankehitriny,eo amin'ny 48%n'ny mponina no miankina amin'ny fambolena. Dimy taona lasa izay, 60% izany. Nihena hatramin'ny 20% ny fampiasana olona eo amin'ny sehatry ny fambolena. Nitombo hatramin'ny 9% ny isan'ny mponina tsy mana-tany, izay mahatratra olona 15 tapitrisa.
Fantatra fa firenena mivelona amin'ny fambolena i Bangladesh, na dia izany aza, miha-mihena isan'andro ny fiankinan-doha amin'ny fambolena. Sary tao amin'ny Wikipedia, Balaram Mahalder. CC: BY-NC
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia niakatra ny vidim-bokatry ny fambolena. Nanjary niha-lafo ny zezika, ny rano tarihana an-tatatra (irrigation), ny herinaratra ary ny solika ka vokatr'izany, niakatra avokoa ny masonkarenan'ny vokatra. Kanefa tsy dia mahazo tombony firy avy amin'ny voka-pambolena ny mpamboly satria tsy miakatra araka ny tokony izy ny vidim-bokatra. Indraindray ary matiantoka izy ireo. Bilaogera Russel  ao amin'ny Amar Blog nanontany ny antony mbola hijanonan'ireo mpamboly amin'ny sehatry ny fambolena :
Raha oharintsika tamin'ny vidin'entana teny an-tsena tamin'ny volana lasa, ny vidin'ny hen'omby iray kilao amin'ny ankapobeny dia BD Taka 270 ($3.4), ny litatry ny menaka soja kosa BDT 140 ($1.75). Ao amin'ny firenena izay tsy maintsy ivarotan'ireo mpamboly vary akotry  20 kilaograma mba hividianana hen'omby iray kilao dia mahagaga fa mbola afaka mivelona amin'izany ihany ny mpamboly.
Mbola hihamafy hatrany ny fiainam-bahoaka mivelona amin'ny 1 dolara isan'andro noho ny olàna ara-tsakafo. Sary: Firoz Ahmed. Copyright Demotix (4/8/2012).
Mipetraka ny ahiahy momba ny fahampiana ara-tsakafo noho ny fihenan'ny tany ambolena sy ny fiankinan-doha amin'ny fambolena. Noho ny fihenan'ny fahefa-mividin'ny olona, maro ireo olona no tsy afaka mividy sakafo araka izay ilainy. Maro ny miahiahy fa raha mijanona tsy hiasa amin'ity sehatra ity intsony ireo mpamboly fa hivadika asa hafa, inona no hitranga.
Economic Intelligence Unit, gazetiboky be mpamaky ao Angletera, namoaka ny filaharana ankapoben'ny tsy fahampiana ara-tsakafo , mitàna ny laharana faha-81 i Bangladesh izay manana isa 34,6 amin'ny 100. Azonao an-tsaina amin'izany salan'isa izany ny toetry ny tsy fahampiana ara-tsakafo ao Bangladesh.
Nilaza ny tatitra tamin'ny 2009 avy amin'ny Fandaharan'asa momba ny Sakafo Manerantany (World Food Program = WFP) sy ny Fikambanana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO)  fa mponina eo amin'ny 35 tapitrisa ao amin'ity firenena ity no tsy ampy 1805 kaloria isan'andro noho ny tsy fisian-tsakafo sy ny tsy fahampian'ny otrikaina amin'ny sakafo. Araka ny filazan'ny Ivom-pikarohana momba ny Fampandrosoana ao Bangladesh, eo amin'ny 50%n'ny mponina eo no miatrika tsy fananan-kanina indray maka (mandritra ny maitsoahitra ohatra) isan-taona, ary 7% kosa no tsy mahavita misakafo in-telo isan'andro. Ampahefan'ny mponina ihany no misakafo ampy mandritra ny taona.
Etsy andaniny, very fotsiny ny sakafo ao amin'ny firenena noho ny tsy fisian'ny fitehirizana sahaza sy ara-potoana ary ny tsy fahaizana mivarotra. Bilaogera Ek Theke Aat  (1 to 8) ao amin'ny Somewhereinblog.net naneho hevitra hoe:
Voka-pambolena eo amin'ny 25-30% eo no very noho ny tsy fisian'ny fomba famokarana maoderina, tsy fahaiza-mivarotra, ny tsy fisian'ny fitehirizana sy ny tsy fahaiza-mitantana ny fitaterana. Eo amin'ny 40 miliara taka ( $500 tapitrisa) eo ny fahaverezana noho ny tsy fisian'ny fitantanana maoderina amin'ny fambolena.
Mba hanatsarana ny fahampiana ara-tsakafo, ilaina ny famatsiam-bola bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ilaina ny fambolena mifototra amin'ny indostria ho fampiasana mahomby ireo voka-pambolena. Nandray fepetra ny governemanta ka hanome fampisamboram-bola ho an'ny fambolena mifototra amin'ny indostria sy fanamboarana sompitra. Araka ny tatitra momba ny teti-bola isan-taona avy amin'ny Bankin'i Bangladesh taona 2011-12, nisy fitomboana hatramin'ny 30 milliara Taka ($370 tapitrisa dolara) ny fampisamboram-bola izay nitombo eo amin'ny 24% eo raha oharina tamin'ny taon-dasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/23/39384/
 Navoakan'ny fanadihadiana farany teo: http://www.amardeshonline.com/pages/details/2012/05/01/143094
 vary akotry: http://en.wikipedia.org/wiki/Rice#Harvesting.2C_drying_and_milling
 ny filaharana ankapoben'ny tsy fahampiana ara-tsakafo: http://foodsecurityindex.eiu.com/
 tatitra tamin'ny 2009 avy amin'ny Fandaharan'asa momba ny Sakafo Manerantany (World Food Program = WFP) sy ny Fikambanana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO): http://www.unnayan.org/reports/Impact_of_Increasing_Landlessness.pdf
 Ek Theke Aat: http://www.somewhereinblog.net/blog/EKTHEKE8/29544002
 Bankin'i Bangladesh : http://www.ekrishi.com/news/index.php?page_id=3&article_id=434&category_id=3